Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Kurume 12, 2018
Vaongorori vesarudzo veSADC avo vari munyika svondo rino voita musangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vatori venhau kumahofisi ehurumende eMunhumutapa muHarare.
Mumwe mupurisa okandwa mujeri kwemazuva gumi mushure mekubatwa nemhosva yekutuka vaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe achiti vainge vanyanya kukwegura zvekuti havaifanira kutungamira nyika uye achishorawo kuroora kwavakaita Amai Grace Mugabe.
Nyaya yekuramwa mabasa kwavanachiremba inonzi inogona kukanganisa Zimbabwe zvikuru kurwisa chirwere chakaita seListeria chiri mune dzimwe nyama chouraya vanhu vakawanda kuSouth Africa chikapararira munyika.
Vagari vekuMasvingo vochema chema nekudzimwa dzimwa kuri kuitwa magesti pasina zviziviso kubva kuZESA.
Amai Auxilia Mnangagwa votungamira chikwata chemadzimai kumusangano wekodzero dzemadzimai kana kuti 62nd Commission on the Status of Women.
Guta reHarare rinoti riri kurasikirwa nemvura yakawanda nenyaya yevanhu vari kupota vachiba mvura.
Muchirongwa cheLiveTalk na 8:00pm, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuramwa mabasa kwavanachiremba apo pachityirwa kuti zvirwere zvakaita seListeria zvikapararira kubva kuSouth Africa, Zimbabwe inenge isina kugadzirira zvakakwana